တဆေးဆိုတဲ့အရာက လူသားတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှ အရာတွေထဲမှာ အစောဆုံးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု့တွေထဲကတစ်ခုပဲဗျ ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ တဆေးဆိုတဲ့အရာကို စာလုံးရေးသားနည်းမပေါ်ခင်ကတည်းကတွေ့ရှိပြီးအသုံးပြုခဲ့ကြတာတဲ့ ။
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေကျတဲ့ပေါင်မုန့်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲ ? ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်နိုင်ငံမှာတီထွင်ခဲ့တာလဲ ?? …………………………………………… စာလေးရှည်ပေမဲ့ ဖတ်ပေးကြပါနော် ။ Baker ဝါသနာရှင်ကော အခြားသူတွေပါ အကုန